Ahoana ny fananganana ny index Spotlight amin'ny macOS | Avy amin'ny mac aho
Ny tsara indrindra, ary amin'ny ampahany, ny fitaovana tokana ananantsika amin'ny macOS hanatanterahana fikarohana amin'ny Mac, dia ny Spotlight, izay tsy ny rindranasa ihany no azontsika jerenaAmin'ny fomba haingana sy mora, fa ao koa ny antontan-taratasy, tsoratadidy, fifandraisana, mailaka, fanendrena alimanaka ary tahirin-kevitra voatahiry ao amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo.
Tahaka ny rafitra fiasa hafa, Spotlight dia mamorona index, na database, izay anaovany izany ny fanovana sy fanovana rehetra natao ho an'ny fampiharana sy ny atiny dia voamarika, mba hahitantsika azy haingana rehefa mila izany isika fa tsy mila miandry. Fa rehefa tsy hitan'ny Spotlight izay tadiavintsika dia misy zavatra tsy mahomby ary ny tsara indrindra azontsika atao dia ny fananganana indray ny index, raha tsy efa nesorintsika teo aloha ny fampahalalana izay tsy tiantsika hidirana.
Ahoana ny fananganana ny index Spotlight
Miakatra isika Taratasy rafitra, amin'ny alàlan'ny sary masina hita ao amin'ny Dock.
Avy eo tsindrio ny kisary Spotlight.
Ao anatin'ny safidin'ny Spotlight dia kitiho ny kiheba Privacy.
Ankehitriny dia tsy maintsy misintona ny kapila mafy izay tadiavintsika ny manondro indray ilay faritra Manakana ny Spotlight tsy hikaroka ireo toerana ireo.
Manomboka amin'io fotoana io dia hitsahatra tsy hanome antsika valiny avy amin'ny kapila mangirana intsony ny Spotlight voafafa ny index.
Hiverina any mamorona indray ny index, tsy maintsy esorintsika io fizarana io, safidintsika ary kitiho ny marika - hita eo amin'ny zoro ambany ankavia.
Miankina amin'ny haben'ny kapilaiko sy ny habaka nozanahinay, ny fanarenana ny index dia mety maharitra minitra vitsy ka hatramin'ny ora vitsivitsy. Mba hijerena ny satan'ny fanondroana anarana dia nankany amin'ny Spotlight izahay ary nanao fikarohana. Raha aseho eo amboniny ny bara fandrosoana dia hanondro izany fa mbola tsy vita ny fizotrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ahoana ny fanamboarana ny index Spotlight amin'ny macOS
Ahoana ny fametrahana endri-tsoratra amin'ny Mac